Aza Avela Hihamangatsiaka ny Fitiavanao: Matio 24:12
Ampio ‘Hanompo An’i Jehovah Amim-pifaliana’ Ireo Vahiny
Ahoana no Azo Anampiana ny Ankizy Vahiny?
TANTARAM-PIAINANA Mahavita Mampianatra Aho na dia Marenina Aza
Aza Avela Hihamangatsiaka ny Fitiavanao
“Tia Ahy Mihoatra Noho ny Itiavanao An’iretsy ve Ianao?”
Nanampy An’ireo Rahalahy i Gaio
Mahafaly ny Manana Fiainana Tsotra
FANTARO NY TANTARANTSIKA ‘Lasa Be Zotom-po sy Be Fitiavana Tsy Nisy Hoatr’izany’
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mingrelian Mongol Mooré Motu Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Mey 2017
“Hihamangatsiaka ny fitiavan’ny olona maro, noho ny fitomboan’ny fandikan-dalàna.”—MAT. 24:12.
HIRA: 38, 128
Inona no azontsika atao mba ho tena tiantsika foana i Jehovah?
Inona no azontsika atao mba ho tena tiantsika ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly?
Nahoana isika no tena tokony ho tia an’ireo mpiray finoana amintsika?
1, 2. a) Nahakasika an’iza ilay tenin’i Jesosy ao amin’ny Matio 24:12? b) Inona no resahin’ny Asan’ny Apostoly momba ny ankamaroan’ny Kristianina voalohany? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
NILAZA famantarana “ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity” i Jesosy. Anisan’izany ny hoe “hihamangatsiaka ny fitiavan’ny olona maro.” (Mat. 24:3, 12) Nilaza ny Jiosy tamin’ny taonjato voalohany fa vahoakan’Andriamanitra izy ireo, nefa ny fitiavan’izy ireo azy aza navelany hihamangatsiaka.
2 Tsy hoatr’izany ny ankamaroan’ny Kristianina tamin’izany. Nazoto “nitory ny vaovao tsara momba an’i Kristy” izy ireo. Nasehon’izy ireo koa hoe tiany Andriamanitra sy ny Kristianina hafa ary ny olona mbola tsy nahalala ny fahamarinana. (Asa. 2:44-47; 5:42) Namela ny fitiavany hihamangatsiaka anefa ny sasany tamin’ny mpanara-dia an’i Jesosy.
3. Inona no mety ho nahatonga ny fitiavan’ny Kristianina sasany hihamangatsiaka?
3 Hoy i Jesosy tamin’ny Kristianina tany Efesosy: “Izao no anomezako tsiny anao: Navelanao ho lefy ilay fitiavanao voalohany.” (Apok. 2:4) Inona no mety ho nahatonga an’izany? Angamba nifindra tamin’izy ireo ny toe-tsain’ny olona nanodidina azy: Tsy nieritreritra afa-tsy izay nahafinaritra azy mantsy ny olona tamin’izany. (Efes. 2:2, 3) Betsaka olona ratsy fitondran-tena tao Efesosy, hoatran’ny tanàna maro amin’izao ihany. Tanàna nanankarena be izy io. Variana niala voly ny olona, ary izay hampiadana azy no tena nataony. Tsy nankatò ny lalàn’Andriamanitra izy ireo. Izay hampifalifaliana ny tenany no nibahana tao an-tsainy, fa tsy ny hampiseho fitiavana an’Andriamanitra sy ny mpiara-belona taminy.
4. a) Ahoana no ahitana fa lasa mihamangatsiaka ny fitiavan’ny olona ankehitriny? b) Inona avy no mila ezahintsika ampitomboina foana?
4 Tanteraka amin’izao koa ilay tenin’i Jesosy, satria mihamangatsiaka ny fitiavan’ny olona maro. Mihatsy tia an’Andriamanitra foana izy ireo. Tsy Andriamanitra no antenainy hamaha ny olana eto an-tany, fa ny fikambanana naorin’ny olombelona. Vao mainka mihamangatsiaka àry ny fitiavan’ny olona tsy manompo an’i Jehovah. Na isika koa aza anefa mety ho lasa hoatr’izany, toa an’ireo Kristianina tany Efesosy. Mety ho lasa afa-po be amin’ny fiainantsika isika, ka hihena ny fitiavantsika. Hodinihintsika àry izao hoe inona no azontsika atao mba hitombo foana ny fitiavantsika an’i Jehovah sy ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly ary ny mpiara-manompo amintsika.
FITIAVANA AN’I JEHOVAH
5. Nahoana isika no tena mila tia an’i Jehovah?
5 Iza no tokony ho tiantsika indrindra? Niresaka an’izany i Jesosy, talohan’ny nilazany hoe hihamangatsiaka ny fitiavan’ny olona. Hoy izy: “‘Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny sainao manontolo.’ Izany no didy lehibe indrindra sady voalohany.” (Mat. 22:37, 38) Raha tena tia an’i Jehovah isika, dia hahavita hankatò ny didiny sy hiaritra ary hankahala ny ratsy. (Vakio ny Salamo 97:10.) Ataon’i Satana sy ity tontolo ity anefa izay hahatonga antsika tsy ho tia an’i Jehovah.
6. Inona no ho vokany raha mihena ny fitiavantsika an’Andriamanitra?
6 Manam-pitiavana ihany ny olona eto amin’ity tontolo ity, saingy tsy araka ny tokony ho izy. Ny tenany no tiany fa tsy ny Mpamorona. (2 Tim. 3:2) Variana amin’ny “fanirian’ny nofo sy ny fanirian’ny maso ary ny fampideraderana fananana” izy ireo. (1 Jaona 2:16) Inona anefa no ho vokany raha izay mahafinaritra antsika fotsiny no tena ataontsika? Hoy ny apostoly Paoly: “Ny fampifantohana ny saina amin’ny nofo dia midika ho fahafatesana.” Lasa fahavalon’Andriamanitra mantsy izay mifantoka amin’izany. (Rom. 8:6, 7) Nisy olona variana nikatsaka harena na variana nanome fahafaham-po ny faniriany hanao firaisana, dia lasa diso fanantenana sy kivy be tatỳ aoriana.—1 Kor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.
7. Inona no mila tandreman’ny Kristianina?
7 Be dia be ny olona tsy mino an’Andriamanitra, na misalasala raha misy izy, na mino ny evolisiona (fiovana miandalana). Ataon’izy ireo izay hahatonga ny olon-kafa tsy ho tia an’Andriamanitra na tsy hino hoe misy izy. Ataony koa izay hieritreretan’ny olona hoe minomino foana na tsy misaina tsara izay mino ny Mpamorona. Ny mpanao siansa indray no hindrahindraina sy hajaina kokoa noho ny Mpamorona. (Rom. 1:25) Mety tsy hifandray tsara amin’i Jehovah intsony isika, raha mihaino ny zavatra ampianarin’izy ireny. Mety hihamangatsiaka mihitsy aza ny fitiavantsika azy.—Heb. 3:12.
8. a) Inona no mety hahakivy ny mpanompon’i Jehovah? b) Nahoana no mampahery antsika ny Salamo faha-⁠136?
8 Mety hisy zavatra hahakivy antsika indraindray eto amin’ity tontolon’i Satana ity. (1 Jaona 5:19) Mety tsy hanam-pinoana sy tsy ho tia an’Andriamanitra anefa isika raha kivy loatra. Manana olana angamba ianao satria mihantitra na marary na tsy manam-bola, na ianao diso fanantenana, na miady mafy amin’ny fahalemenao. Mety halahelo koa ianao satria tsy vitanao tsara ny zavatra tianao hatao. Na inona na inona anefa manjo anao, dia aza mieritreritra hoe tsy miraharaha anao i Jehovah. Mieritrereta andinin-teny manaporofo hoe tia anao foana izy. Anisan’izany ny Salamo 136:23, hoe: “Nahatsiaro antsika izy tamin’isika naetry: Fa mandrakizay ny hatsaram-panahiny feno fitiavana.” Afaka matoky àry ianao fa mihaino ny fitalahoanao izy ary hamaly ny vavaka ataonao.—Sal. 116:1; 136:24-26.
9. Inona no nanampy an’i Paoly ho tia an’i Jehovah foana?
9 Notadidin’ny apostoly Paoly hoe manampy azy foana i Jehovah. Nampahery azy izany. Hoy izy: “Jehovah no mpanampy ahy, ka tsy hatahotra aho. Inona moa no azon’ny olona atao amiko?” (Heb. 13:6) Nahavita niatrika ny olana nahazo azy i Paoly, satria natoky tanteraka hoe tia azy sy mikarakara azy i Jehovah. Tsy kivy be izy na inona na inona nanjo azy. Nanoratra taratasy maromaro mampahery aza izy tamin’izy nigadra. (Efes. 4:1; Fil. 1:7; Filem. 1) Tena tia an’i Jehovah foana i Paoly, na dia mafy aza ny nanjo azy. Nahoana? Niantehitra foana tamin’ilay “Andriamanitry ny fampiononana rehetra” izy, dia ilay Andriamanitra “mampionona antsika amin’ny fahoriantsika rehetra.” (2 Kor. 1:3, 4) Inona àry no hanampy antsika ho tia an’i Jehovah foana hoatran’i Paoly?
Asehoy fa tianao i Jehovah (Fehintsoratra 10)
10. Inona no hanampy antsika ho tia an’i Jehovah foana?
10 Anisan’ny tena manampy antsika ho tia an’i Jehovah foana ny vavaka. Hoy i Paoly: “Aza mitsahatra mivavaka.” Hoy koa izy: “Mahareta amin’ny vavaka.” (1 Tes. 5:17; Rom. 12:12) Miresaka amin’i Jehovah isika rehefa mivavaka, ary tena ilaina izany raha te hifandray akaiky aminy isika. (Sal. 86:3) Raha maka fotoana tsara àry isika mba hiresahana amin’ilay “Mpihaino vavaka”, ka lazaintsika aminy izay tena ao an-tsaintsika sy ao am-pontsika, dia hifandray akaiky kokoa aminy isika. (Sal. 65:2) Rehefa hitantsika koa hoe novaliany ny vavaka nataontsika, dia vao mainka isika ho tia azy. Lasa matoky kokoa isika hoe “akaikin’izay rehetra miantso azy i Jehovah.” (Sal. 145:18) Hahavita hiaritra isika dieny izao sy amin’ny hoavy, rehefa matoky hoe tia antsika i Jehovah sady manampy antsika.
FITIAVANA NY FAHAMARINANA
11, 12. Inona no hanampy antsika ho tia kokoa ny fahamarinana?
11 Tiantsika ny fahamarinana, satria Kristianina isika. Ao amin’ny Tenin’Andriamanitra no tena ahitana azy io. Hoy mantsy i Jesosy rehefa nivavaka tamin’ny Rainy: “Ny teninao no fahamarinana.” (Jaona 17:17) Mila mahafantatra an’izay voalazan’ny Baiboly àry ny olona iray vao afaka ny ho tia ny fahamarinana. (Kol. 1:10) Tsy ampy anefa ny hoe fenoina fahalalana fotsiny ny saina. Misy zavatra hafa tokony hataontsika koa, araka ny hazavaina ao amin’ny Salamo 119. (Vakio ny Salamo 119:97-100.) Mila misaintsaina an’izay novakintsika tao amin’ny Baiboly isika mandritra ny andro. Tokony hoeritreretintsika tsara ny soa ho azontsika raha mampihatra an’izay novakintsika isika. Vao mainka isika ho tia ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly raha manao an’izany.
12 Hoy koa ny mpanao salamo: “Mamy amin’ny lelako ny teninao, mihoatra noho ny tantely ao am-bavako!” (Sal. 119:103) Toy ny sakafo matsiro ny boky sy gazety avoakan’ny fandaminan’i Jehovah. Rehefa mihinana sakafo tena tiantsika isika, dia maka fotoana tsara hankafizana an’ilay izy. Hoatr’izany koa no tokony hataontsika amin’ny sakafo ara-panahy. Maka fotoana tsara isika hianarana azy ireny. Ho tadidintsika amin’izay ny “teny mahafinaritra”, izany hoe ny fahamarinana ianarantsika, dia ho azontsika ampiasaina hanampiana olon-kafa.—Mpito. 12:10.
13. Inona no nahatonga an’i Jeremia ho tia ny fahamarinana, ary inona no vokatr’izany taminy?
13 Tian’i Jeremia ny fahamarinana ao amin’ny Soratra Masina, ary tena nisy vokany taminy izany. Hoy izy: “Hitako ny teninao ka nohaniko. Maharavoravo ahy ny teninao sady mahafaly ny foko. Fa antsoina amin’ny anaranao aho, ry Jehovah Andriamanitry ny tafika ô!” (Jer. 15:16) Toy ny hoe nihinana ny teny nolazain’i Jehovah taminy i Jeremia rehefa nisaintsaina an’ilay izy. Lasa tsapany fa voninahitra lehibe ny hoe antsoina amin’ny anaran’Andriamanitra, izany hoe misolo tena azy. Raha tia ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly koa isika, dia hiaiky hoe voninahitra lehibe ny antsoina hoe Vavolombelon’i Jehovah. Tombontsoa koa ny mitory momba ny Fanjakany amin’izao andro farany izao.
Asehoy fa tianao ny fahamarinana (Fehintsoratra 14)
14. Inona no hanampy antsika ho tia kokoa ny fahamarinana?
14 Inona koa no hanampy antsika ho tia kokoa ny fahamarinana, ankoatra ny hoe mamaky ny Baiboly sy ny boky sy gazety avoakan’ny fandaminana? Mila manatrika fivoriana tsy tapaka isika. Anisan’ny fomba lehibe indrindra ampianaran’i Jehovah antsika ny fianarana Baiboly isan-kerinandro amin’ny alalan’ny Tilikambo Fiambenana. Mila manomana tsara àry isika mba ho azontsika tsara ilay fianarana. Tsara, ohatra, raha jerena daholo ny andinin-teny. Azo alaina ao amin’ny tranonkala jw.org Ny Tilikambo Fiambenana, na jerena ao amin’ny programa JW Library. Misy amin’ny fiteny be dia be ilay izy. Vetivety ianao dia mahita ny andinin-teny, rehefa mampiasa gazety amin’ny endrika elektronika sasany. Na gazety vita pirinty anefa no ampiasainao na amin’ny endriny elektronika, dia vakio tsara sy saintsaino ireo andinin-teny. Vao mainka ho tianao ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly, raha manao an’izany ianao.—Vakio ny Salamo 1:2.
FITIAVANA NY MPIARA-MANOMPO
15, 16. a) Inona no tsy maintsy ataontsika, araka ny Jaona 13:34, 35? b) Inona no ifandraisan’ny fitiavantsika ny mpiara-manompo amin’ny fitiavantsika an’Andriamanitra sy ny Baiboly?
15 Hoy i Jesosy tamin’ny mpianany, ny alina talohan’ny nahafatesany: “Omeko didy vaovao ianareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Toy ny nitiavako anareo no tokony mba hifankatiavanareo koa. Raha mifankatia ianareo, dia izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo.”—Jaona 13:34, 35.
16 Misy ifandraisany ny hoe tia an’i Jehovah sy ny hoe tia ny mpiara-manompo. Tsy afa-misaraka ireo. Hoy mantsy ny apostoly Jaona: “Izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, dia tsy afaka ny ho tia an’Andriamanitra izay tsy hitany.” (1 Jaona 4:20) Misy ifandraisany amin’ny hoe tia ny Baiboly koa ny hoe tia an’i Jehovah sy ny mpiara-manompo. Ny Baiboly mantsy no mandidy antsika ho tia azy ireo. (1 Pet. 1:22; 1 Jaona 4:21) Hazoto hankatò an’izany isika, raha tiantsika ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly.
Asehoy fa tianao ny mpiara-manompo (Fehintsoratra 17)
17. Inona no azontsika atao mba hampisehoana hoe tiantsika ny mpiara-manompo amintsika?
17 Vakio ny 1 Tesalonianina 4:9, 10. Inona no azontsika atao mba hampisehoana hoe tiantsika ny mpiara-manompo amintsika? Raha misy be taona mila fanampiana, ohatra, rehefa hivory, dia azo atao ny maka sy manatitra azy. Mety hisy zavatra simba koa ao an-tranon’ny anabavy iray efa maty vady, dia afaka manampy azy isika. (Jak. 1:27) Azo atao koa ny mampahery ny olona kivy na miady saina be na manana olana hafa, na antitra izy na tanora. (Ohab. 12:25; Kol. 4:11) Porofointsika amin’izay lazaintsika sy ataontsika hoe tena tiantsika ny “mpiray finoana amintsika.”—Gal. 6:10.
18. Inona no hanampy antsika handamina ny disadisa kely eo amintsika samy isika?
18 Milaza ny Baiboly fa ho tia tena sy ho tia vola ny olona, rehefa akaiky hifarana ity tontolo ratsy ity. (2 Tim. 3:1, 2) Mila miezaka mafy àry isika Kristianina mba ho tia kokoa an’Andriamanitra sy ny fahamarinana ary ny mpiray finoana amintsika. Marina aloha fa mety hisy disadisa kely indraindray eo amintsika samy isika. Tena mahafinaritra anefa rehefa samy miezaka hanam-pitiavana ny rehetra, ka mandamina amin-katsaram-panahy an’izay olana mitranga. (Efes. 4:32; Kol. 3:14) Enga anie àry isika tsy hamela ny fitiavantsika hihamangatsiaka mihitsy, fa ho tena tia foana an’i Jehovah sy ny Teniny ary ny mpiara-manompo.
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Mey 2017